Balkana, Rosia: Voasambotra i Radovan Karadžić · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2018 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Araka ny tatitra, voasambotra tao Serbia tamin'ny alin'ny Alatsinainy ny lehiben'ny Serba Bosniana teo aloha sady anisan'ny gadra nitsoaka karohana indrindra manerantany Radovan Karadžić.
Eric Gordy ao amin'ny East Ethnia:
Douglas Muir avy ao amin'ny A Fistful of Euros:
Balkan Ghost ao amin'ny Finding Karadzic:
Sarah Franco ao amin'ny Cafe Turco:
Shaina ao amin'ny Bosnia Vault:
Tsy isalasalana fa hahitana ny tononkalon’ ny dokotera mahafinaritra izany. […]
Mpisera LJ monina ao Moskoa grenzlos (Arthur Medvedev) nandefa tononkalo roa avy amin'i Karadžić, nandika tamin'ny teny Rosiana.
Mpisera LJ log2stas nanoratra izao :
Pikantsary tao amin'ny tranonkalan'ny Interpol. Avy amin'ny loharanom-baovao iray ihany ny pikantsary ao amin'ity lahatsoratra ity.